भाइरल ज्वरोका बिरामीले अस्पताल भरिभराउ, ४० जनामा डेंगु देखियो - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ प्रदेश १ ∕ भाइरल ज्वरोका बिरामीले अस्पताल भरिभराउ, ४० जनामा डेंगु देखियो
भाइरल ज्वरोका बिरामीले अस्पताल भरिभराउ, ४० जनामा डेंगु देखियो
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७६ भदौ १० गते, २१:३१ मा प्रकाशित
कोशी अस्पतालमा बिरामीहरू
विराटनगर–तराईमा अत्याधिक गर्मी बढेसँगै विराटनगरको अस्पतालमा भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्यामा बढेको छ । मौसममा आएको परिवर्तनको कारण भाइरल ज्वरोको बिरामीको संख्यामा वृद्धि भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकामा रहेको कोशी अस्पताल, विराट नर्सिङ्ग होम, नोबेल मेडिकल कलेज, न्यूरोलगायतका अस्पतालमा भाइरल ज्वरो भएको विरामीको संख्यामा वृद्धि आएको हो । सबैभन्दा बढी कोशी अस्पतालमा बिरामीको छन् ।
कोशी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भाइरल ज्वरोका बिरामीको चाप बढेकोे अस्पतालका डा. सङ्ज्ञा ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा दैनिक ३० बढी भाइरल ज्वरोका बिरामी आउने गरेको जानकारी दिए । ‘भाइरल ज्वरो आउँदा शरीर तातो हुने, धेरै ज्वरो आउने, टाउको र शरीर दुख्ने र वान्ता हुने लक्षण देखा पर्दछ,’ उनले भने । यसको लक्षण डेंगुसँग मिल्दोजुल्दो रहेको चिकित्सकको भनाइ रहेको छ ।
अस्पतालमा विगत दुई महिनाको अवधिमा दुई हजार ५ सय भन्दा बढी भाइरल ज्वरोका बिरामी आएर उपचार गराएको डा ज्ञवालीले जानकारी दिए । बिरामी भएर आउनेमा मोरङ, सुनसरीका सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने छन् । भाइरल ज्वरोबाट बच्न मास्कको प्रयोग गर्ने, धेरै भीड भएको ठाउँमा नजाने, झोल खानेकुरा बढी खाने र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने सल्लाह डा. ज्ञवालीले दिए ।
४० जना डेंगुका बिरामी
अस्पतालमा उपचार गराउन आएका बिरामीमध्ये ४० जनामा डेंगुका संक्रमण देखिएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा डेंगु पहिचान गर्ने कीटको अभाव नरहेको डा. ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘ज्वरो आएको भन्दै अस्पतालमा उपचार गर्न आएका थिए,’ उनले भने, ‘उपचार भएकामध्ये ४० जनाको स्वास्थ्य परिक्षणमा डेंगुको संक्रमण देखियो । उनीहरूको उपचार भइरहेको छ ।’
कसरी बच्ने डेंगुबाट
डेंगु रोगबाट बच्न दिउँसो हिड्दा शरीर छोपिने कपडा लगाएर हिड्ने, घरको वरिपरि पानी जम्न नदिने र घरभित्र भाडा, बोतलमा पानी जमाएर नराख्ने, सुत्केरी भएका महिलाले आफू र बच्चालाई यो संक्रमणबाट बच्न झुलको प्रयोग गर्ने, धेरै मानिस आवतजावत हुने स्थानमा नजाने आदि सुझाव चिकित्सकले दिएका छन् ।
उच्च ज्वरो आउनु, शरीरका जोर्नी दुख्नु, आँखाका गेडी दुख्ने, शरीरमा रातो धब्बा देखिनु र वाकवाक लाग्ने भएमा डेंगुको संक्रमण भएको बुझ्नुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ । त्यस्तो लक्षण देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर तत्कालै उपचार गराउनुपर्ने सल्लाह चिकित्सकको रहेको छ ।